Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Dhismaha Capitol-ka Mareykanka ayaa laga daadgureeyay cabsida bamka awgeed
Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dhismaha HHS Humphrey
Hanjabaadda bamka ayaa la soo sheegay abbaare 10kii subaxnimo ee dhismaha HHS Humphrey ee ku yaal 200 block of Independence Avenue ee badhtamaha magaalada DC Dhismahaas waa laga saaray.
Lix waddo oo ku xeeran US Capitol iyo Waaxda Caafimaadka ee Washington, DC ayaa maanta la xiray.
Dhismaha HHS Humphrey ayaa laga saaray subaxnimadii Arbacada sababo la xiriira hanjabaad bam.
Waxaa jira joogitaanka sharci fulinta weyn agagaarka dhismaha US Capitol iyo HHS ee Washington, DC.
Dhammaan waddooyinka ku teedsan Xarunta Capitol-ka Maraykanka iyo Waaxda Caafimaadka ee Maraykanka ee Washington, DC, ayay booliisku xidheen maanta, sababo la xidhiidha khatarta bambaanooyinka ee laga soo sheegayo goobtaas.
Lix waddo, oo ay ku jiraan Waddada Washinton iyo Waddada Saddexaad, ayaa la xiray iyadoo Booliska Capitol ay baarayeen khatarta bam ee Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka oo ku taal Waddada Madax-bannaanida - oo ay sidoo kale xireen booliisku.
Waxaa jira joogitaanka sharciga oo weyn aagga. Ciidamo ka tirsan kuwa amniga gudaha ayaa lagu arkayay goobtaasi oo xiray wadooyinka, waxaana dad badan oo laga soo daadgureeyay dhismayaal u dhow dhow ay isugu soo baxeen afaafka hore ee Madaxtooyada Mareykanka.
Sarah Lovenheim, Kaaliyaha Xoghayaha Arimaha Bulshada ee HHS, ayaa soo saartay bayaankan soo socda:
"Saaka waxaa jirtay hanjabaad bam oo lagu soo qaaday Dhismaha Humphrey. Taxaddar badan awgeed, waanu ka guurnay dhismaha mana jirto wax dhibaato ah oo la soo sheegay. Waxaan xaalada si dhow ula soconaa Adeegga Ilaalinta Federaalka. Su'aal kasta waxaa lagu hagaajin karaa Adeegga Ilaalinta Federaalka."
HHS waxay kala shaqaynaysaa Adeegga Ilaalinta Federaalka si ay u qiimeyso xaalada, sida uu qabo Lovenheim.
Dhismaha Capitol ayaa ahaa bartilmaameedka tirada sii kordhaysa ee hanjabaadaha tan iyo bishii Janaayo markii kumanaan kun oo taageerayaasha madaxweynihii hore ee Donald Trump ay weerareen fadhi wadajir ah oo Congress-ka ah.
Kooxda Lufthansa ayaa dib u soo celisay lacagtii lagu lahaa Jarmalka...